Ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo ao Moskoa dia namolavola vahaolana vaovao momba ny fanaraha-maso ny araben-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo ao Moskoa dia namolavola vahaolana vaovao momba ny fanaraha-maso ny araben-tany
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny Rafitra fanaraha-maso ny fahasimban'ny pahefana Interactive dia novolavolaina taorian'ny fandinihana tsara sy fanandramana ireo vahaolana momba ny injeniera samihafa.
Rafitra vaovao hanaraha-maso ny fizotran'ny lalana eo amin'ny seranam-piaramanidina.
Ny rafitra vaovao dia hanampy ny seranam-piaramanidina amin'ny fanamboarana sy fandaminana fikolokoloana maharitra.
Ny rafitra dia misy fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny kilema an-habakabaka sy ny fanamboarana natao.
Moscow Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sheremetyevo dia namolavola rafitry ny fampahalalam-baovao ara-jeografika maoderina hanaraha-maso ny toe-pirenen'ny seranam-piaramanidina sy hanampy ny seranam-piaramanidina amin'ny fanamboarana sy ny fikolokoloana maharitra.
Ny Rafitra fanaraha-maso ny fahasimban'ny pahefana Interactive dia novolavolaina taorian'ny fandinihana tsara sy fanandramana ireo vahaolana momba ny injeniera samihafa. Izy io dia mampiasa ny angon-drakitra seranam-piaramanidina Synchron ary loharanom-pahalalana tokana momba ny toetoetran'ny fizotran'ny artifisialy ho an'ny singa rehetra amin'ny seranam-piaramanidina rehetra.
Ny rafitra dia misy fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny kilema an-habakabaka sy ny fanamboarana vita, ao anatin'izany ny fanehoana an-tsary ireo singa an'habakabaka manokana, ary manana modely mamokatra tatitra.
Mamela ny rafitra Seranam-piaramanidina Sheremetyevo injeniera hanara-maso ny toe-javatra eo amin'ny lampivato artifisialy ary hamaly avy hatrany izay fiviliana rehetra, noho ny fisehoan-javatra iray izay maneho ny lesoka amin'ny sarintanin'ny seranam-piaramanidina ankapobeny. Ny rafitra dia mirakitra ihany koa ny fampahalalana mitsikera momba ny kilema manokana momba ny araben'ny seranam-piaramanidina, ao anatin'izany ny karazana sy ny toetran'ny kilema, ny toerana misy ny kilema, ny daty sy ora nitrangan'ilay kilema, ny refin'ny lesoka, ary ny haben'ny risika atolotry ny kilema.
Ny rafitra dia fitaovana mahomby amin'ny fitantanana teknika sy ara-bola ary koa fiarovana satria manampy ny fitantanana seranam-piaramanidina amin'ny drafitra ara-bola maharitra, manombatombana ny loharanon-karena ilaina amin'ny fanamboarana ny arofenitra artifisialy sy ny fifehezana ny fe-potoana fanamboarana azo antoka.
Seranam-piaramanidina TOP-5 any Eropa ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo, seranam-piaramanidina rosiana lehibe indrindra amin'ny resaka fifamoivoizana sy ny mpandeha. Tamin'ny taona 2020, ny seranam-piaramanidina dia nanolotra mpandeha 19 tapitrisa 784.